नेपालमा पहिलो मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउने श्रेष्ठ भन्छन्– तिमीमाथि परीक्षण गर्न खोजिएको हो भनेर तर्साइयो
बुढानिलकण्ठ निवासी हेमराज श्रेष्ठको भर्खर ३६ वर्ष पूरा भएको थियो । मिर्गौला फेल भए । मिर्गौला फेल भएपछि डायलाइसिस गराए ९ महिना । श्रीमती मिर्गौला दान गर्न तयार भएपछि प्रत्यारोपण गराउने सोच बनाए । नेपालमा प्रत्यारोपण थालिने हल्ला चलेपनि निश्चित नभएपछि भारततिर लागे । भारत रहेकै बेला नेपालमा प्रत्यारोपण थालिने खबर पाएपछि फर्किए । संयोगले पहिलो मिर्गौैला प्रत्यारोपण उनकै भयो । प्रत्यारोपणपछि सक्रिय जीवनमा फर्किएका उनी दोस्रो जीवन पाएको बताउँछन् । नेपालमै मिर्गौला प्रत्यारोपणको १० वर्ष पूरा भएको अवसरमा उनले स्वास्थ्यखबरकर्मी डिबी खड्कालाई आफ्नो अनुभव सुनाएका छन् :
कोही भन्दा कम छैनन् नेपाली डाक्टर
२०६५ साल साउन २४ गते मेरो मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको हो । सुरुमा नेपालमा प्रत्यारोपण हुने थिएन त्यसैले हामी दिल्ली गयौँ । डाक्टरसाहेब (डा दिव्या सिंह)ले नेपालमै प्रत्यारोपण गर्ने तयारीमा छौं भन्नुभएको थियो तर टुंगो लागिसकेको थिएन । भारतमा पुगेर प्रत्यारोपण बारे बुझिरहेका बेला नेपालमै सुरु हुने खबर पाइयो । त्यसपछि किन दिल्लीमा गर्ने ? भनेर नेपाल फर्किएँ । सकेसम्म पहिले नै मै गराउँछु नभए जहिले भएपनि नेपालमा नै गराउँछु भनेर फर्किएँ । आफ्नो देशमा पहिलो प्रत्यारोपण गरिने भाग्यमानी मै ठहरिएँ।
नेपालीहरु नेपाली डाक्टरले उपचार नै गर्न सक्दैनन् भन्ने ठान्छन् । नेपाली डाक्टरहरु उनीहरुले सोचेको जस्तो नजान्ने छैनन् । त्यसको उदाहरण म हुँ । म १० वर्षसम्म यसरी जिइरहेको छु । मेरो अनुभवमा नेपाली डाक्टरहरु कुनै विदेशी भन्दा कम छैनन् । विदेशमा गरेको प्रत्यारोपण भन्दा नेपालको कम छैन।
मलाई लाग्छ, डाक्टरहरुले आफूले गरेको काम सफल होस् भनेर लाग्नुहुन्छ । त्यही अनुसार बिरामी निको पार्ने कोशिश गर्नुहुन्छ । यही त्यो कुराको ज्ञान भएकै कारणले म तयार भएको हुँ।
परीक्षण गर्न खोजिएको भनेर तर्साइयो
मलाई नेपालमा नगराउन चिनेजानेका, साथीभाई र आफ्ना आफन्तले सुझाव दिन्थे। श्रीमतीमार्फत् पनि दबाब दिन्थे । बुवाआमालाई भन्थे । यस्तो भन्न दिनमा दुई जना आउँथे । उनीहरुको भनाई हुन्थ्यो, ‘उनीहरु सफल हुँदैनन् । तिमीमा परीक्षण गर्न खोजिएको हो ।’ नेपालका डाक्टर राम्रा नभएकाले तिमी मर्छाै भनेर तर्साइन्थ्यो।
यस्तो भन्नेहरुका पछि म लागिनँ । उनीहरुलाई आइन्दा यसरी नतर्साउनुहोला, मलाई मेरो उपचार गरिरहेका डाक्टरप्रति विश्वास छ भनेर फर्काउँथें । मेरो र मेरो मिसेसको आत्मबल बलियो बनाएर हामी प्रत्यारोपणका लागि तयार भएका थियौं।
डाक्टरहरु आफू सक्षम भएर मात्र त गर्ने आँट गर्नुभएको होला भन्ने मनमा थियो । त्यसैमा एउटा महिला डाक्टर ( डा दिव्या सिंह)ले नेतृत्व लिनुभएको थियो । मलाई महिलाले नै जन्म दिएकी हुन् । दोस्रो जन्म पनि महिला डाक्टरले नै दिनुभएको भनेर सुनाउँदा गर्व लाग्छ।
म मरें भने पनि अरु बिरामीलाई राम्रो हुन्छ होला भन्ने भावनाले पनि मलाई तयार हुन सजिलो बनायो । उहाँले आफ्नो बलबुद्धि दुवै लगाएर मेरो मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुभयो । त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म अस्पताल भर्ना हुनु परेको छैन । आफ्नै व्यवसाय गरेर खाएको छु।
मैले सधैं भन्ने गर्छु– नेपालमा पनि सक्षम डाक्टर छन् । उहाँहरु प्रति विश्वास गर्नुहोस् । विश्वास गर्नुहुन्न भने उहाँहरु नकारात्मक धारणा नफैलाइदिनुहोस्।
आत्मविश्वास कमजोर बनाउनु हुँदैन
मेरो मिर्गौला खराब भएको ८ वर्ष पछि फेल भयो । आठ वर्षखअघिदेखि औषधि खाइरहेको थिएँ । एकदिन मिर्गौला बिग्रिन्छ भनेर थाहा थियो । तर, निरास थिइनँ । कुनै न कुनै उपाय निस्किएला भनेर आशावादी थिएँ।
मान्छेहरुमा अहिले पनि चेतना छैन । मिर्गौला सुन्निनासाथ मरिन्छ भन्ने भान परेको छ । मिर्गौला फेल हुँदैमा मान्छेको मृत्यु हुँदैन । तर आत्मविश्वास भने कहिल्यै कमजोर बनाउनुहुँदैन । हरेस खायो भने बिरामी नभएको मान्छे पनि मर्ने गर्छ । आफ्नो मन बलियो बनायो, खानपिनमा ध्यान दियो र हिँड्डुलमा सजगता अपनायो भने केही हुँदैन। म अहिलेसम्म आफ्नो व्यवसाय गरेर सक्रिय जीवन बिताइरहेको छु।
मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको भन्दा छक्क पर्छन्
मैले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको छु भन्दा मान्छेहरु छक्क पर्छन् । उनीहरु पत्याउनु कसरी ? म बिरामी जस्तो देखिए पो पत्याउछन् त । आत्मबल कायम राखेर डाक्टरहरुको सुझाव अनुसार चल्यो भने केही हुँदैन।
शिक्षण अस्पतालमै प्रत्यारोपण गराएका केही साथीहरु चिन्छु । कोही सगरमाथा चढिसके । कोही प्रहरीको उच्च तहमा छन् । कोही ड्राइभिङ राम्ररी गरिरहेका छन् । त्यसैले प्रत्यारोपणपछिको जीवनलाई लिएर निरास हुनुहुँदैन ।
तस्विर र भिडियो: निमेशजंग रार्इ